QEYBTA 16 - ZUHRA
Kiiska Kismaayo iyo kala fikir duwanaanshaha ka jira.
Waayaha cusub iyo mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya.
Xasuuqa Kenya xad gudubka Raaskambooni iyo xeeladda Azaan...
Sheeko qosol badan:- Ma xil qaran doonbaa mise waa ���..?
Wararka Maanta Ee Soomaaliya
Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay arimo badan oo Somaliland iyo Jubooyinka ka mid ah.
Madaxweynaha Somaliland oo maanta ka hadlay arinta ah inay dib ula midoobaan Soomaaliya inteeda kale.
Amar kama dambeys ah laga soo saaray xildhibaanada baarlamaanka ee ka maqan kala fadhiyada baarlamaanka.
Korneel Buule "Ciidamada xooga dalka Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo oo dhan gacanta ku qaban doona"
Ciidamada Raaskambooni oo maanta dad shacab ah ku laayay magaalada Kismaayo.
Wafdi ka socday IGAD oo maanta gaaray magaalada Kismaayo iyo kulamo halkaasi ka soconaaya.
Howlgalo lagu bur burinaayo goobaha sharci darada ah oo ka socda qaar ka mid ah degmooyinka Muqdisho.
Rag ku labisan dareeska ciidamada dowladda Soomaaliya oo dhac baahsan u geeystay dad shacab ah.
WAR DEG DEG AH:- Qarax ka dhacay magaalada Baydhaba ee xarunta gobalka Bay.
Ciidamo taageera Axmed Madoobe oo soo gaaray magaalada Kismaayo iyo dhaq dhaqaaqyo ka socda magaaladaasi.
Sheekh Fu'aad Shongole "Meel walba oo cadowga ay joogaan kala joogsi malahan duulaanada aan ku qaadeeyno"
Yuusuf Indha Cade "Dowladda amaankii Muqdisho ayeey ka adkaan la'dahay maxay Jubooyinka ka doonee"
Somaliland oo maanta u dabaal degaysa 18-ka May oo ay sheegaan in Soomaaliya ay ka go'een.
Qarax ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobalka Sh/dhexe.
Wafdi IGAD ka socda oo maanta ku wajahan magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose.
Al-shabaab oo dhawaan la filaayo in laba garab ay noqdaan iyo dagaalo laga cabsi qabo inuu dhex maro.
Dibad bax lagu tageeraayay Axmed Madoobe oo maanta ka dhacay magaalada Garoowe.
Gudoomiyaha baarlamaanada wadamada Carabta oo maanta magaalada Muqdisho soo gaaray.
WAR DEG DEG AH:- Wafdi ka socda IGAD oo soo gaaray magaalada Muqdisho iyo kulamo ay haatan la qaadanaayaan ...
Talaabo ceeynkee ah ayeey dowladda Soomaaliya ka qaadan doontaa arinta ka taagan magaalada Kismaayo.
Maxaa maanta ka cusub magaalada Kismaayo oo mudooyinkiii dambe xaalad kacsanaan ay ka jirtay.
Dagaal qasaare geeystay oo ka dhacay deegaano ka mid ah gobalka Bakool.
Warar sheegaaya ciidamo ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka tagay Gedo oo ku dhaw Kismaayo.
C/naasir Seeraar "Dowladda qasab ayeey ku taageeri doontaa maamulka Jubaland"
DHAGEEYSO WAREEYSIGA:- Sheekh Xasan Daahir Aweys oo afkii kala furtay sir badanna kashifay (AKHRISO).
Dowladda Soomaaliya oo maanta war-saxaafadeed kasoo saartay arimaha gobalada Jubooyinka.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta warqadihii safiirnimo ka gudoomay safiirka koonfurta Korea ee Soomaaliya.
Barre Hiiraale oo maanta loo caleema saaray xilka madaxweyne ee maamulka Jubaland.
Odayaashii ku xanibnaa garoonka Kismaayo oo loo ogolaaday inay gudaha u galaan magaaladaasi.
Maxay dowladda Soomaaliya ka tiri doorashadii madaxweynaha maamulka Jubaland ee Kismaayo ka dhacday.
Axmed Madoobe "Dhibaatadii Kismaayo ka dhacdaa dowladda Soomaaliya ayaa mas'uul ka ah"
Taliska ciidamada AMISOM oo go'aan deg deg ah ka qaadanaaya ciidamada Kenya ee Jubooyinka jooga.
Waa maxay hadal heeynta maanta ee shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo.
Cumar C/rashiid "Waxaan marqaati ka nahay ayaa magaalada Kismaayo ka dhacay"
Howlgalo culus oo ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobalka Sh/dhexe.
Prime Minister sends condolences and condemns the Turkish bomb attack.
Somalia Prez�s luxury trip at your expense: �50k for London jaunt
New Police Chief Commissioner vows to reform and rebuild the Somali Police Force
Somali president defies Al-Shabaab by venturing into Mogadishu.
Somalis express cautious hope about London conference.
Sentencings approach in somali terror case.
AU special representative has called on the Somali Diaspora in the UK to contribute towards their country�s...
The new government in Mogadishu has yet to prove its mettle.
US says it supports Somalia to ensure stable government
Dhacdooyinka Caalamka iyo Xulka Wararka
Nabadoon Axmed Diiriye oo baaq u diray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya oo muddo badan ka dib maanta la wareegtay maamulka hawada dalka Soomaaliya.
Sidee ayaa amaanka dalka wax looga qaban karaa, shacabkana kaalin intee la'eg ayaa kaga aadan.
Faysal Cali Waraabe oo ka hadlay kulankii uu la yeeshay madaxweynaha dowladda Soomaaliya.
Gudoomiye Tarsan oo si cajiib ah uga hadlay amaan xumida ka jirta magaalada Muqdisho.
Diyaarada Air Uganda oo dhawaan duulimaadyo rasmi ah ka bilaabi doonta Muqdisho.
Xildhibaano wada abaabulka mooshin ka dhan ah xukuumadda Soomaaliya.
DAAWO SAWIRADA:- Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Faysal Cali Waraabe oo kulmay.
Wasiirka gaashaandhiga ee dowladda Soomaaliya oo sheegay qorshooyin culus oo dowladda damacsan tahay.
Cumar C/rashiid "Aniga shirka Kismaayo ka socda waxba kuma lug lihi muwaadin Soomaaliyeed baan ka ahay"
Faah faahin:- Nin ku sugan magaalada Burco oo si naxdin leh u dilay xaaskiisa oo dhawaan uu guursaday.
Madaxweynane Xasan Sheekh Maxamuud oo dar daaran culus u jeediyay shacabka Soomaaliyeed.
Khilaafkii ka dhaxeeya saraakiisha Al-shabaab oo cirka isku shareeray.
Rag hubeeysan oo degmada Hilwaa ku dilay askari ka mid ah dowladda Soomaaliya.
Tirada rasmiga ah ee ciidan oo AMISOM uga dhimatay dalka Soomaaliya oo la shaaciyay.
Shariif Sheekhunaa Maye oo maanta xilka wareejin doona.
Bandoow ka dhaqan galay degmada Afgooye ee gobalka Sh/hoose.
Faah faahin ku saabsan dagaal ka dhacay duuleedka B/weyne.
Xukuumada Soomaaliya oo wax ka qabaneeyso arinta qaxootiga soomaalida ah ee ku sugan dalka Yemen.
Meydka qof rayid ah oo lagu arkay magaalada Baydhaba.
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo la wareegay deegaano ka mid ah J/hoose.
Qaraxyo aad u waaweyn oo laga maqlay magaalada Muqdisho.
Wasiirka gaashaandhiga oo ku dhaliilay dalalka caalamka taageero la'aanta dhanka hubka ah.
Dad shacab ah oo dilay askari ka mid ah sirdoonka dowladda Soomaaliya.
Taliska AMISOM oo ku dhaartay in si deg deg ah ay wax uga qaban doonaan qal qalka amaan ee ka jira Muqdisho.
Kulan culus oo ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose.
May 18 2013 13:51:59
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu ka hadlay arimo aad iyo aad u badan oo xasaasi ah, xilli uu xariga ka jaraayay goob lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah oo Turkiga ay ka fureen magaalada Muqdisho.
May 18 2013 13:51:13
Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa maanta waxa uu si la yaab leh uga hadlay arinta ku saabsan inay la midoobaan Soomaaliya inteeda kale, isagoona sheegay inay u go'een ka dib markii ay arkeen waxyaabo ka yaabsaday.
May 18 2013 13:50:31
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa amar kama dambeys ah waxa uu kasoo saaray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka maqan fadhiyada baarlamaanka, isagoona sheegay in ku dhawaad 100 xildhibaan ay maqan tahay.
May 18 2013 13:49:32
Korneel Maxamed Buule oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in gacan bir ah ay ku qaban doonaan amaanka magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose, hadii amaan xumi ay ku arkaan.
May 18 2013 13:48:58
Wararka ka imaanaaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Raaskambooni ay maanta dad shacab ah ku dileen suuq ku yaala magaaladaasi.
May 18 2013 13:48:29
Waxaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose gaaray wafdigii IGAD ka socday ee la sugaayay inay gaaraan magaaladaasi, waxaana xaaladda magaaladaasi ay tahay mid amaankeeda aad loo sugaayo.
May 18 2013 13:47:59
Qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho waxaa ka socda howlgalo balaaran oo lagu bur burinaayo goobaha sharci darada ah ee ay dad shacabka ah dhisteen, iyadoo meelo badan la dumiyay.
May 18 2013 09:59:24
Wararka ka imaanaaya gobalka Sh/hoose ayaa waxay sheegayaan in rag ku labisan dareeska ciidamada dowladda Soomaaliya ay dhac baahsan u geeysteen dad shacab ah oo gaari rakaab ah saarnaa.
May 18 2013 09:53:19
Wararka haatan naga soo gaaraya magaalada Baydhaba ee xarunta gobalka Bay ayaa waxay sheegayaan in qarax aad u xoogan uu ka dhacay magaaladaasi, kaas oo qasaare geeystay.
May 18 2013 09:42:27
Wararka ka imaanaaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ayaa waxay sheegayaan in magaaladaasi ay soo gaareen ciidamo badan oo taageera Axmed Madoobe, kuwaas oo ka kala yimid sida la sheegay deegaanada dhanka Kilinka Shanaad ee Soomaalida Itoobiya.
May 18 2013 09:06:45
Sheekh Fu'aad Maxamed Khalaf (Fu'aad Shongole) oo kamid ah saraakiisha Xarakada Al-shabaab ayaa sheegay inay sii xoojin doonaan weerarada ka dhanka ah ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo gobalada dalka Soomaaliya.